Wasaarada beeraha Ethiopia oo gabi ahaan dafirtay abaaraha ba’an ee ka jira gobolka Sitti+sawiro. – Xeernews24
Wasaarada beeraha Ethiopia oo gabi ahaan dafirtay abaaraha ba’an ee ka jira gobolka Sitti+sawiro.
17. Mai 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Alamayo Burhano oo ah masuul ka tirsan wasaarada beeraha Ethiopia ayaa waxa uu gabi ahaanba dafiray in ay abaari ka jirto deegaanka Soomaalida Ethiopia gaar ahaan gobolka Sitti.
Masuulkan ayaa waraysi idaacada VOA ay la yeelatay ku sheegay in aynan habayaraatee abaaroi ka jirindeegaano ka tirsan gobolka Sitti.
Sarkaalka oo ka jawaabaya su’aalo la waydiiyay ayaa waxa uu gabi ahaanba dafiray in aynan abaaro ka jirin gobolka waxana uu yidhi”Majiraan cid gaajoonaysa oo gobolkaa ku nool oo cunto u baahan”.
Mar la waydiiday in dad kasoo jeeda deegaanadan oo ay waraysteen ay sheegeen in ay jiraan dad u dhintay sababta abaartan ayaa waxa uu ku jawaabay’oo uu yidhi”Mahayno war bixin kusaabsan abaartan oo ay noo soo direen masuuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida oo sheegaysa in deegaanadaa ay jiraan dadka ku gaajoonaya”.
Sarkaalkan ayaa waxa uu sheegay kaliya inay jiraan xoolo abaartani ay saamaysay oo deegaanadan ku sugan.Waxa kale oo uu intaa raaciyay in deegaanadan ay gaadhsiiyeen calafkii xooluhu ay cuni lahaayeen.
Masuulkan ayaa waxa uu sheegay in sababta ay calafka xoolaha deegaanadan ay u gaadhsiiyeen ay tahay roob la’aan ka jirta deegaanadaa.
Waxa kale oo masuulkani uu sheegay in ay dabagal ku samaynayaan wararkan sheegaya in ay abaari ka jirto deegaanadan.
Sarkaalkan ayaa waxa uu gabi ahaanba dafiray abaartaan aadka u ba’an ee gobolka ka jirta tasoo xadgudub aad u wayn ku ah bulshada deegaanadan ku nool iyo dadkii abaarahan ay saameeyeen oo badhkood sababta abaartan ay u dhinteen.
Sarkaalkan ayaa u muuqday mid aanan dan ba ka halayn iska ina indha tiray masiibadan abaartu ay keentay ee bulshadii deegaankan ku noolayd macaluul ay qarka u saaran yihiin hadii aanan lala soo gaadhin gargaar deg deg ah.
Hadalada masuulkan ayaa ah kuwo runt aad uga fog,fadeexad wayna ku ah mansabkiisa,iyada oo xadgudub aad u wayna uu ku yahay xuquuqda bani’aadanka gaar ahaan dadkan abaaruhu saameeyeen.
Waxa kale oo masuulkani uu ku guul daraystay masuuliyadii bulshadan macaluulaysa ka saarnayd oo ah bad baadintan muwaadiniintiisa gaajada u dhimanaysa.
Waxa kale oo hadalada masuulkan aad u burinaya oo ka horimanaya bulshadii abaarahani ay barakiciyeen oo ka taalabay xuduuda Ethiopia ay la wadaagto Djibouti iyada Televishanka Djibouti laga baahiyay dadkan oo la quudinayo.
Wararka aan ka helnay dadkan abaaruhu soo barakiciyeen ee ku sugan gobolka Dikhil ee koonfurta Djibouti ku yaal ayaa sheegaya in dhowr qof ay u dhinteen cudurka shuban ka.
Abaartan ayaa waxa ay xoog u u saamaysay degmada Erer gaar ahaan deegaanada kala ah,Casbuli, Cadaytu, Cundhufa, Qiiqle,Saaxa,Badhi-wayn, Cay-dhiidhi, Qaylawayn,Caydoora,Gadhwayn,Urdala iyo Tabci.
Wararkan ka imanaya deegaanadan abaaruhu ka dilaaceen ayaa xaqiijay in dad tobonaan gaadhaya ay ku dhinteen abaartan. Waxa sido kale abaartan aad ugu madhay xoolo badan oo bulshada deegaanadan ay lahayd iyada oo la sheegay in xanuuno la garan waayay ay haleeleen xoolahan,tasoo sababtay in hor hormo ay dhintaan xoolahani.
Waraysiga salkaalkan wasaarada beeraha Ethiopia ayaa waxa uu ka dambeeyay uun waraysi dhawaan uu siiyay VOA da Adan Alaale oo kamid ah wax garadka gobolka Sitti xili uu ku sugnaa magaalada Diridhabe.
Waraysigan uu bixiyay Adan Alaale ayaa waxa uu kaga waramay xaalada abaareed ee aadka u ba’an ee gobolka ka jirta waxana waraysiga wasiirka beeraha Ethiopia uu u muuqdaa mid Ethiopia ay ku damacsan tahay sidii aduunyada ay uga qarin lahayd masiibada xooga le ee gobolka ka jirta.
Hadalada sarkaalkan ayaa waxa ay ahaayeen hanjabaad iyo digniin ku wajahan cidkasta oo dhabta abaarahan ba’an ee ka taagan gobolka warbaahinta caalamka ug gudbisa.
Ethiopia ayaa ah mid kamid dalalka dunida ugu daran ku xadgudubka xuquuqda bani’aadanka iyada oo dalkaasi ay ka jirto in bulshada loola dhaqmo qaab adoonsi gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Ethiopia.
Dadkii xoola dhaqata ahaa ee ka barakacay deegaanadooda
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/05/suuu.jpg 400 700 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-05-17 17:48:052019-05-17 17:49:23Wasaarada beeraha Ethiopia oo gabi ahaan dafirtay abaaraha ba’an ee ka jira gobolka Sitti+sawiro.
Ingiriiska Oo Sheegay Inaanay Dunidu Mahadin Wada Hadaladii Hargeysa Iyo Muqdisho,... Dowladaha Jabuuti, Itoobiya , Suudaanta Koonfureed iyo Uganda oo Ku Heshiiyay...